Literature/Books » Paulo Coelho ပြောတဲ့ စာရေးဆရာဆိုတာ	15
View all posts by Aye Khaing →	Blog
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မန်းဂဇက်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ စာတွေ အားရပါးရ ရေးပါဦးနော် ဆရာရေ။
Aye Khaing says: ကျေးဇူး ဆရာမ။ ကျွန်တော်က ရေးဖြစ်တာတွေရှိပေမယ့် ဘာသာပြန်ချင်စိတ်က ပိုများနေလို့ နောက်ဆုံး ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ရင်း တစ်ခုခု စမ်းရေးကြည့်၊ စိတ်တိုင်းမကျရင် .. နောက်ဆုံး ဖတ်ထားတာတွေထဲက တစ်ခုခု ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဟိုစစ ဒီစစ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဖြစ်ကုန်ရော။ ကြိုးစားပါဦးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ပို့စ်အကြောင်းတောင် မပြောရသေးဘူး။ နံပါတ် (င) စာရေးဆရာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
ဦးဦးပါလေရာ says: ငယ်ငယ်က ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ လိုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး
Aye Khaing says: ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းပြောတဲ့ခေတ်လောက်ကတောင် အတော်ဟန်ကျသေးတယ် ထင်တာပဲ။ ခုကတော့ အတော်ပဲ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတင်မကပါဘူး။ တချို့နိုင်ငံတွေက စာရေးဆရာတွေလည်း အလားတူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြတာပါပဲ။ ဘယ်တော့များမှ ဘယ်တော့များမှပေါ့ခမျာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ပုံပေါ်လာသဗျ…။
Aye Khaing says: author နဲ့ writer ကို ခွဲပြောချင်ပုံပါပဲ။ အမေရိကန်မှာတော့ ငါးဖမ်းတဲ့အကြောင်းလည်း စာအုပ်ရေးတာပဲ။ ထင်းခုတ်တဲ့အကြောင်းလည်း စာအုပ်ရေးတာပဲ။ ဒီမှာဆိုရင်လည်း နက္ခတ္တရောင်ခြည်ထဲ ဆေးမြီးတိုပို့တဲ့သူတွေပါ စာရေးဆရာ အမည်ခံကြမယ်လား မသိဘူး။ ခွဲခေါ်ဖို့ရာကလည်း မဖြစ်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်မှ ပိုက်ဆံ တစ်ခါရတာချင်း တူသော်လည်း ၀တ္ထုတစ်အုပ်ရေးဖို့အချိန်ပေးရတာနဲ့ တခြားစာအုပ်နဲ့က ကွာဦးမှာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း အမေရိကန် အဖိုးကြီးလိုပဲ အပြင်ကိုငေးပြီး တွေးနေရမလားပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Thint Aye Yeik says: ပထမဆုံး ပိုစ့်နဲ့တင် လေးစားသွားပြီ။
Aye Khaing says: ဂေဇက်ကတော့ အတော် နွေးထွေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားရှိသွားပါတယ်။ မောင်းမချသမျှပေါ့လေ။ :P
မြစပဲရိုး says: မောင်းမချပါဘူး ကွယ်။ ပျောက်သွားမှာသာစိုးရိမ်ကြတာပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ :-))
လုံမလေးမွန်မွန် says: အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ပါ . . . The Story of the Pencil . . . How to Climb the Mountains . . .Remaining in Love တွေကို ဘာသာပြန်ဖူးတယ် . . . ဒီလိုမျိုး ချောမနေဘူး . . . အဲဒီထဲက စာတွေကို ဘာသာပြန်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ရှင့် .
Aye Khaing says: ကျွန်တော် ပေါ်လိုကွယ်လ်ဟိုးတွေ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အကုန်ကြိုက်လှတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတစ်အုပ်ကတော့ အက်ဆေးလေးတွေလို ဖြစ်နေလို့ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်နေတာ ရှိတယ်လို့လည်း အသိတစ်ယောက်ဆီကတစ်ဆင့် ကြားတယ်။ ဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လည်း ဝေမျှပြီး ပေးဖတ်စေချင်တာပေါ့လေ။ ဟဲဟဲ။ ကျွန်တော်လည်း ထပ်ပြန်ကြည့်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး . . . လွယ်တာလေးတွေပဲ ရွေးပြီး ပြန်ကြည့်ထားတာပါ အခု ပြန်ထားတာကို ဖတ်ရတာက ချောနေတာပဲ . . . ကိုယ့်စာကို ရှက်လို့ မပြတော့ပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ယသထဲမှာ ဆရာကြီးရတနာဝင်းထိန် အကြိုက်ဆုံးပဲ.. ဖတ်ဖူးလား။
ခင်ဇော် says: ဒီရွာ ထဲ မှာတော့
ဘယ်လို လူမျိုးကို စာရေးဆရာ လို့ သတ်မှတ်တယ် မသိပေမယ့် စာရေးးဖို့ အချိန်ပေးနိုင်သူတွေ အားလုံး ကို လေးစား မိပါတယ်… ☺️☺️☺️